सत्ता, भत्ता र राजनीतिक चलखेल | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार सत्ता, भत्ता र राजनीतिक चलखेल
on: ४ चैत्र २०७४, आईतवार ०५:३० पाठक विचार
संसारका मानिसमा पनि दुई रूप हुन्छन्, एउटा राम्रो पक्ष र अर्को नराम्रो पक्ष । राम्रो पक्षको कुरा गर्दा औसतमा नेपालका मानिस सोझा नै छन् । खान पिउनुको बाहेक प्रायः अरूलाई हानि पु¥याउने नेपालीहरूको संस्कार छैन । नराम्रो पक्षको कुरा गर्दा ज्यादा अन्धविश्वास, अल्लारेपन र आशावादी हुने तर आपूmले सकेको योगदान लाजले भनौं वा नचाहेर भनौं कम गर्ने जसले गर्दा मुलुकको विकास सधैं उस्तै देखिने हो ।
नेपालमा प्रायः नेताहरूमा पनि बढी लालच, दोषारोपण गर्ने, योगदानको भावना नहुनु यसैको उपज मान्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि यहाँका देश चलाउनेलाई लिऔं । कोठामा बस्ने भत्ता, सत्ता र कुर्सीको छिनोफानो गर्ने, गोप्य भागबण्डा, दाताहरूको आशा गर्ने, आश्वासन दिने तर समाज र मुलुकका लागि दूरदर्शिता नगर्ने बरु कुर्सी भएन भने अनुहार निन्याउरो बनाएर कलह गर्ने । अब यिनीहरूबाट के अपेक्षा गर्नु । जे होस् अरू नभए पनि एकदम दक्षता भएका व्यक्तिलाई मुलुक विकासका लागि अगाडि राख्नुपर्ने होइन र ? जहिले पनि जस्ताको तस्तै छ ।
‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेझैं अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा एक हिसाबले हेर्ने हो भने मानिसका भौतिक सुविधालाई हेर्दा मुलुकमा विकास नभएको भन्न मिल्दैन । यति सानो मुलुक भएर पनि विलासी मानसिकताले भनौं या व्यक्तिगत पैसा भएर भनौं, मानिसहरू प्रायः यहाँ सन्तोष छन्, कारण खान पिउन पाइराकै छ । योभन्दा बढी के चाहियो त ? तर, कतिपय व्यक्ति देशका आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा समाजलाई चाहिने सानातिना विकासका सुस्तताले गर्दा उति खुशी छैनन् । यी कारणले गर्दा मुलुक सधैं एकनासले हिँडिराखेको आभास हुन्छ ।
उदाहरणका लागि जलस्रोतको कुरा गर्ने हो भने देशका ठूलाठूला जलस्रोतका कार्य सधैं कलह, कमिशनको चक्कर, मनमुटावका कारण सुस्त र अल्झिराखेको झैं लाग्छ । यसले गर्दा आर्थिक लाभ आउनुबाट यो मुलुक वञ्चित भइराखेको हामी पाउँछौं । यसबाहेक पुलहरू, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग अर्थात् फाष्ट ट्र्याकका कुराहरू गर्दा एकदम ढिला गतिमा गइराखेको जस्तो लाग्छ ।
वास्तवमा एकपल्ट फेरि भन्नुपर्दा लोकतन्त्र आएको यत्रो समय भइसक्दा पनि सामानहरू निर्यातभन्दा आयात बढी, व्यवसाय उद्योग घाटा, बैङ्क तथा पूँजी बजार कमजोर हुनुजस्ता कुरा अलि खल्लो लाग्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो मुलुकमा दिन प्रतिदिन नयाँनयाँ प्रणाली आइराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले उद्योग व्यवसाय तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सकिराखेका छौं । जुन दुःखलाग्दो कुरा हो । कति जनतालाई परिवर्तनका लागि कराउनु, कति नेतालाई गाली गर्नु ? सधैं रेकर्ड कोरिएजस्तै एक अर्कोलाई कोसेर के औचित्य भयो र ?
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले मुलुकमा दक्षता भएका व्यक्ति, ठूला लगानीकर्ता आदि सबै कुराले पायक परेको छ । यहाँ यस्तो अवस्थामा मुलुक हाँक्नेहरूले यी सबै अवसरलाई अँगालेर नयाँनयाँ दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । तर, यहाँ कुरा धेरै हुन्छ, कार्यान्वयन प्रायः एउटा पनि हुँदैन । जुन तथ्यरूपमा सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो ।
अब त मुलुकमा एकलौटी सरकार पनि आइसकेको छ । वर्तमान सरकारबाट यहाँ आशा गरौं, सबै प्रदेशसहित मुलुकलाई नमूना विकास उन्मुक्त राष्ट्रले चिनाऊँ । तर, यसका लागि सधैं नेताहरू केही विषयमा गम्भीर हुने हो भने देश विकास भनेको कुनै ठूलो कुरा होइन । खालि सरकारमा दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, कानून कडा हुनुपर्छ ।
सर्वप्रथम इमानदार र दक्षता भएका व्यक्तिहरूको छनोट हुनु आवश्यक छ । यस्ता मानिसले मात्र मुलुक चाँडोभन्दा चाँडो विकास गरेर राम्रो बनाउन सक्छन् । तर, यसका लागि हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेलाई पार्टीले भनौं वा प्रधानमन्त्रीले छनोट गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ गुरुयोजना तयार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ, अनावश्यक सरकारी भत्ता, उपचार खर्च, मनोरञ्जन, सवारी, विदेश भ्रमण आदि जस्ता कुराहरूमा रकमहरू लड्डुपेडासरह नबाँडी मितव्ययिता अपनाउनु सक्नुपर्छ । तर, सर्वसाधारण जनताका लागि भने कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । जस्तै रोजगार, भत्ता, बाटोघाटो, फ्रि मनोरञ्जन, फोहोर समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, पानी आदि कुरामा सरकारले मन ठूलो गर्न सक्नुपर्छ । यसपछि सरकारले सर्वसाधारणका लागि करको दायरा फराकिलो गर्न सक्छ ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी दाता, विप्रेषण, करको आशा धेरै गर्ने होइन, केवल विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई उद्योग व्यवसाय पर्यटन र जलस्रोतका लागि बाटो खुलाएर रकम भिœयाउने हो । यसका लागि सरकारले यिनीहरूलाई हौसला दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।